IBibelkring: “Iqembu Labafundi BeBhayibheli”
NGASEKUPHELENI kwawo-1930 kwavela inhlangano yenkolo entsha ebizwa ngokuthi iBibelkring (okuyigama lesiDashi elisho “iqembu labafundi beBhayibheli”) endaweni ebizwa ngokuthi iLake Toba eNyakatho Sumatra. Le nhlangano yaqala ngemva kokuba othisha bethole izincwadi ephayoneni elalivakashile, cishe u-Eric Ewins, owayeshumayele kule ndawo ngo-1936. Lokho othisha abakufunda kwabenza bashiya iSonto LobuProtestani LaseBatak, baqala amaqembu afunda iBhayibheli emakhaya. Lawo maqembu akhula futhi asabalala kwaze kwaba yilapho amalungu awo ebalelwa emakhulwini. *
ULimeria Nadap-Dap owayeyilungu leBibelkring manje usengumKristu
La malungu okuqala eBibelkring afunda izincwadi ezazishiywe yiphayona, athola amaqiniso amaningana eBhayibheli. “Enqaba ukushayela ifulege indesheni, agwema nokugubha uKhisimusi nezinsuku zokuzalwa. Amanye aze ashumayela nasendlini ngendlu,” kusho uDame Simbolon, owayeyilungu lale nhlangano owamukela iqiniso ngo-1972. Ngenxa yokuthi yayingaxhumani nenhlangano kaNkulunkulu, ngokushesha yazithola isilawulwa imibono yabanye abantu. “Abesifazane babengavunyelwe ukugcoba izimonyo, ukugqoka izinto zokuhloba, izingubo zesimanje ngisho nezicathulo,” kuchaza uLimeria Nadap-Dap, omunye owayeyilungu lale nhlangano manje osengudadewethu ongokomoya. “Amalungu ale nhlangano ayengavunyelwe nokuba nomazisi, okuyinto eyathukuthelisa uhulumeni.”
IBibelkring yagcina ihlukene yaba maqembuqembu futhi kancane kancane yaphela. Kamuva lapho amaphayona ebuyela endaweni yaseLake Toba, abaningi ababekade bengamalungu eBibelkring balamukela iqiniso.
^ isig. 1 Ezinye izincwadi zilinganisela ukuthi iBibelkring yake yaba namalungu afinyelela ezinkulungwaneni.